Vaovao - Tetikasan'ny trano fisakafoanana an'ny mpamokatra fanaka amin'ny masoandro
Tetikasan'ny trano fisakafoanana avy amin'ny mpamokatra fanaka amin'ny masoandro
Ny Sun Master dia tsy fanamboarana fanaka ivelany any ivelany fotsiny izay manana traikefa 20 taona mahery tamin'ny mpanamboatra fanaka zaridaina sy mpamatsy seza kafe, fa ny orinasa mpamorona endrika vaovao kosa dia maodely maherin'ny 30 isaky ny vanim-potoana. Manam-pahaizana manokana izahay amin'ny seza fiandrasana fipetrahana miaraka amina wicker, fanaka ety ivelany ary fanaka ivelany miaraka amin'ny vovo vita amin'ny vovoka vita amin'ny alim-by sy fefy vy mifangaro amina karazana fitaovana toy ny hazo plastika sy ny hazo teak
Miaraka amin'ny fivoaran'ny indostrian'ny Catering, ny fahafinaretana ny tontolo mahafinaritra miroboka no laharam-pahamehana ankoatry ny sakafo matsiro. Ny karazana fanovana sy fanavaozana dia mikendry ny fanatsarana ny mahafinaritra ny traikefan'ny mpanjifa, mba hitondrana olona maro kokoa hahazo tombony bebe kokoa. Fantatra tsara ny famolavolana anatiny sy ny fanavaozana ny rivo-piainana izay miasa manodidina ny filan'ny mpanjifa, mampihena ny kalitao tsara indrindra amin'ny serivisy tsara indrindra. Mandritra izany dingana rehetra izany, ny fanaka dia mitana toerana lehibe ho an'ny olona, ​​toy ny fanaka ivelany.
Miaraka amin'ny fitomboan'ny harinkarena ara-toekarena, tsy manahy intsony ny vahoaka ny amin'ny fahazoana sakafo ampy. Fa kosa, ny olona dia mikarakara mankafy sakafo mahafinaritra sy traikefa samy hafa rehefa mandray ny sakafo. Ny fanehoana ny fomba tokony hisian'ny trano fisakafoanana hankafizany ny sakafo dia toa fahaizana fototra ho an'ny mpamorona trano fisakafoanana mahay. Ny endrika lamaody dia miova amin'ny endrika isan-karazany, na ny fanaka ivelany na ny fanaka fisakafoanana dia arakaraka izany. Ka na eo am-panatanterahana tetikasa iray aza izahay dia tokony hojerena ny endrika: ny fanaka, ny habaka ary ny endrika anatiny. Andao hiverina amin'ny fampiharana. Ny fanangonana ny seza fisakafoanana sy ny latabatra mety dia manatsara ny fijerin'ny fahitana.
Ny fomba fananganana endrika trano fisakafoanana tsara, mba hahafeno ny filan'ny mpanjifa, ny fisainana amin'ny fomba fijerin'izy ireo, ny famoronana ny sampy sy ny marika amin'ilay toerana dia mifandray. Fotoana fohy, ny trano fisakafoanana malaza dia tsy ho an'ny sakafo ihany, fa ho an'ny hatsarana ihany koa. Eto isika dia hiresaka momba ny fanaka ety ivelany, ireo karazana seza any ivelany any ivelany.
Zava-dehibe ny toerana. Ny boss dia mety manana fahatakarana mazava amin'ny karazana trano fisakafoanana sasany. Ny vondrona mihinana, ny haavon'ny fanjifana ary ohatrinona ny vidiny.
Na dia voamarina aza ny toerana dia zava-dehibe ny fanaovana fandalinana mankany amin'ny mpanjifa. Ny toetoetran'ny mpanjifa ho avy, ny isan'ny mpitsidika dia ampiana hamorona ny kolontsaina fisakafoanana. Raha lazaina izany, raha mbola takatsika mazava tsara ireo lasibatra kendrentsika dia tokony hifidy ny endrika anatiny araka ny fomba mahaliana azy ireo isika. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny seza fisakafoanana sy ny latabatra fisakafoanana no lakilen'ny famoronana ny fiasa sy ny endrika tsara tarehy.
Ny fiasan'ny trano fisakafoanana dia noforonin'ny fanaka. Ny fanaka ety ivelany dia ahafahan'ny mpanjifa mankafy amin'ny habakabaka ivelany miaraka amin'ny masoandro sy rivotra madio. Eto, inona ny votoatin'ny trano fisakafoanana? Matsiro, mazava ho azy. Ny tontolo mahafinaritra dia manatsara ny traikefa, tsy misy vatana mandà ny toerana mahafinaritra, milamina amin'ny fialan-tsasatra.
Ity tetikasa ity dia miorina ao amin'ny magazay fiantsenana Taikoohui, izay namboarin'i Arquitectonica malaza eran-tany. Fantatry ny Sun Master ny filan'ny mpanjifa ary manome fanohanana feno ny fanaka anatiny sy ivelany izy ireo amin'ny maha mpanamboatra seza wicker azy ireo ary mpamatsy latabatra hazo plastika.
Amin'ity tetik'asa ity, ny fanaka ety ivelany dia mila mampifanaraka ny habaka ivelany, miorina amin'ny fanaingoana izay mitazona ny fifandanjana eo amin'ny fanaka ivelany sy ny endrika anatiny. Ny seza fisakafoanana dia azo ampiasaina ao amin'ny hotely, bara, trano fisotroana kafe, ankafizo amin'ny fampiharana marobe.
Ankafizo ny tara-masoandro, ankafizo ny nahandro mahafinaritra, miaraka amin'ny serivisy mahafinaritra avy amin'ny fanaka ety ivelany Sun Master.